ပျော်ရွှင်စရာဘဝကို ပိုင်ဆိုင်လိုသလား၊ အောက်က အချက် (၁၀) ကို လိုက်နာကြည့်ပါ။ - SANTHITSA
သင်ဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ အလုပ်များထဲမှာ အာရုံနှစ်ပြီး အလုပ်တွေပိနေလို့ လုပ်ငန်းခွင်ကို
မပျော်ရွှင် ဘူးလို့တွေးနေမိပါသလား။ သင့်ကို ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ သင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စည်းမျဉ်းအချို့ကို ချမှတ် ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် သင်ပျော်ရွှင်မှာပါ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO)က ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝ ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ လုပ်ငန်းခွင်စည်းမျဉ်း ဆယ်ချက်ကို မျှဝေထားပါတယ်။
၁… သင့်အနေနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အလွယ်တကူ မယုံကြည်ပါနဲ့… ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းကိုတော့ တန်ဘိုးထား လေးစားပါ။
၂…. သင်ဟာ အလုပ်မှာ ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အလုပ်မှာပဲ ချန်ထားခဲ့ပါ။ အလုပ်ထဲက အတင်းအဖျင်းများနဲ့ အရေးမပါတဲ့ ကိစ္စတွေကို အိမ်ကိုဘယ်တော့မှ သယ်ဆောင်မလာပါနဲ့။ အလားတူပါပဲ
အိမ်က ကိစ္စဝိစ္စ အတင်းအဖျင်းတွေကိုလည်း အလုပ်ဆီ ကိုသယ်ဆောင်မသွားပါနဲ့။
၃….. အလုပ်ချိန်ကိုလေးစားပါ.. အချိန်မှီသွားပါ.. အလုပ်ပြီးတာနဲ့ အိမ်ကို အရင်ဆုံးရောက်အောင်ပြန်ပါ။ သင့်လုပ်ငန်းခွင် စားပွဲတွေ ကွန်ပျူတာတွေက သင့်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်အောင် မကူညီနိုင်ပါဘူး။
၄….. လုပ်ငန်းခွင်မှာ အချစ်ရေး မတည်ဆောက်ပါနဲ့ ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့အခါ အလုပ်မှာ
တွေ့နေမြင်နေရပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေကာ အလုပ် လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
၅….. ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ပါနဲ့ .. တစ်ယောက်ယောက်က ကူညီရင် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။
မကူညီရင်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိအောင်လေ့လာပါ။
၆…. ရာထူးနေရာအတွက် အလျင်မလိုပါနဲ့.. ရာထူးတိုးခံရရင် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ.. ရာထူးတိုး မခံရရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါ.. သင့်ဗဟုသုတနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုက ရာထူးတိုးခြင်း မတိုးခြင်းနဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
၇….. ရုံးအလုပ်အတွက်ချည့် ပြေးလွှား မနေပါနဲ့ ။ ဘဝမှာ သင့်အတွက် အရေးပါတဲ့ လုပ်စရာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
၈…. လုပ်ခလစာဟာ အရေးပါသလို သင့် ပျော်ရွှင်မှုဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
၉…. လူတွေ သင့်အပေါ် ဘယ်လို ကောင်းမွန်စွာ ပြုမူဆက်ဆံသလဲဆိုတာ အရေးမကြီးပါ..
သင်က လူတိုင်းအတွက် အရသာခံစရာ စားကုန်တစ်ခု ဖြစ်မနေဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
၁၀…. သင့်မှာ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း အိမ်နဲ့ ရင်တွင်း ငြိမ်းချမ်းမှုကလွဲလို့ တခြားဘာမှ အရေးမကြီးဘူးလို့ ယုံထားပါ။
ဒီလို လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ဘဝအတွက် စည်းမျဉ်းတွေ ချမှတ်ပြီး လိုက်နာခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်မှာ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ မဝေးတော့ဘူးလို့ သိလိုက်ပါ။
ပြျောရှငျစရာဘဝကို ပိုငျဆိုငျလိုသလား၊ အောကျက အခကျြ (၁၀) ကို လိုကျနာကွညျ့ပါ။
သငျဟာ တဈနတေ့ဈနေ့ အလုပျမြားထဲမှာ အာရုံနှဈပွီး အလုပျတှပေိနလေို့ လုပျငနျးခှငျကို
မပြျောရှငျ ဘူးလို့တှေးနမေိပါသလား။ သငျ့ကို ပြျောရှငျတဲ့ဘဝ ပိုငျဆိုငျဖို့ သငျ့လုပျငနျးစဉျအတှငျး စညျးမဉျြးအခြို့ကို ခမြှတျ ထားလိုကျမယျဆိုရငျ သငျပြျောရှငျမှာပါ။
ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အစညျး (WHO)က ပြျောရှငျတဲ့ဘဝ ပိုငျဆိုငျစဖေို့ လုပျငနျးခှငျစညျးမဉျြး ဆယျခကျြကို မြှဝထေားပါတယျ။
၁… သငျ့အနနေဲ့ ဘယျသူ့ကိုမှ အလှယျတကူ မယုံကွညျပါနဲ့… ဒါပမေဲ့ လူတိုငျးကိုတော့ တနျဘိုးထား လေးစားပါ။
၂…. သငျဟာ အလုပျမှာ ဘာပဲဖွဈခဲ့ဖွဈခဲ့ အလုပျမှာပဲ ခနျြထားခဲ့ပါ။ အလုပျထဲက အတငျးအဖငျြးမြားနဲ့ အရေးမပါတဲ့ ကိစ်စတှကေို အိမျကိုဘယျတော့မှ သယျဆောငျမလာပါနဲ့။ အလားတူပါပဲ
အိမျက ကိစ်စဝိစ်စ အတငျးအဖငျြးတှကေိုလညျး အလုပျဆီ ကိုသယျဆောငျမသှားပါနဲ့။
၃….. အလုပျခြိနျကိုလေးစားပါ.. အခြိနျမှီသှားပါ.. အလုပျပွီးတာနဲ့ အိမျကို အရငျဆုံးရောကျအောငျပွနျပါ။ သငျ့လုပျငနျးခှငျ စားပှဲတှေ ကှနျပြူတာတှကေ သငျ့ကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျအောငျ မကူညီနိုငျပါဘူး။
၄….. လုပျငနျးခှငျမှာ အခဈြရေး မတညျဆောကျပါနဲ့ ခဈြသူနဲ့ အဆငျမပွတေဲ့အခါ အလုပျမှာ
တှနေ့မွေငျနရေပွီး စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈစကော အလုပျ လုပျနိုငျစှမျးကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။
၅….. ဘာကိုမှ မမြှျောလငျ့ပါနဲ့ .. တဈယောကျယောကျက ကူညီရငျ ကြေးဇူးတငျလိုကျပါ။
မကူညီရငျလညျး ကိုယျ့ဟာကိုယျ သိအောငျလလေ့ာပါ။
၆…. ရာထူးနရောအတှကျ အလငျြမလိုပါနဲ့.. ရာထူးတိုးခံရရငျ ဂုဏျယူလိုကျပါ.. ရာထူးတိုး မခံရရငျလညျး ကိစ်စမရှိပါ.. သငျ့ဗဟုသုတနဲ့ ယဉျကြေးမှုက ရာထူးတိုးခွငျး မတိုးခွငျးနဲ့ လုံးဝ မသကျဆိုငျပါဘူး။
၇….. ရုံးအလုပျအတှကျခညျြ့ ပွေးလှား မနပေါနဲ့ ။ ဘဝမှာ သငျ့အတှကျ အရေးပါတဲ့ လုပျစရာတှေ ရှိနပေါသေးတယျ။
၈…. လုပျခလစာဟာ အရေးပါသလို သငျ့ ပြျောရှငျမှုဟာလညျး အရေးကွီးပါတယျ။
၉…. လူတှေ သငျ့အပျေါ ဘယျလို ကောငျးမှနျစှာ ပွုမူဆကျဆံသလဲဆိုတာ အရေးမကွီးပါ..
သငျက လူတိုငျးအတှကျ အရသာခံစရာ စားကုနျတဈခု ဖွဈမနဖေို့ပဲ လိုပါတယျ။
၁၀…. သငျ့မှာ မိသားစု၊ မိတျဆှသေူငယျခငျြး အိမျနဲ့ ရငျတှငျး ငွိမျးခမျြးမှုကလှဲလို့ တခွားဘာမှ အရေးမကွီးဘူးလို့ ယုံထားပါ။
ဒီလို လုပျငနျးခှငျနဲ့ ဘဝအတှကျ စညျးမဉျြးတှေ ခမြှတျပွီး လိုကျနာခဲ့မယျဆိုရငျ သငျ့မှာ ပြျောရှငျတဲ့ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျဖို့ မဝေးတော့ဘူးလို့ သိလိုကျပါ။